बेलायत र अमेरिकामा डेढ महिनायताकै न्यून मृत्यु, विश्वभर कहाँ कति संक्रमण र मृत्यु ?
> बेलायत र अमेरिकामा डेढ महिनायताकै न्यून मृत्यु, विश्वभर कहाँ कति संक्रमण र मृत्यु ?
काठमाडौं, २९ बैशाख । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमणबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको अमेरिकामा नयाँ संक्रमण र मृत्यु हुनेको संख्या घटेको देखिएको छ । त्यहाँ पछिल्लो २४ घण्टामा अमेरिकामा ७ सय २० जनाको मृत्यु भएको छ । यो डेढ महिनायताकै न्यून मृत्यु हो ।